UMthetho: qaphela, iminyaka yobudala iyahlukahluka Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Ubudala bemvume
Enye yemingeni ebalulekileyo kubazali, izikolo, abantu abatsha kunye namagunya omthetho namhlanje kukunceda abantwana abaselula bahambe ngokukhawuleza kwimihlaba yamnyama phakathi kwe-16 neminyaka eyi-18. I-teknoloji ye-intanethi yenza ukuba kudalwe kunye nokudluliselwa kwemifanekiso yokuvuselela ngesondo ngokokunye umntu onesi-smartphone, kubandakanya nayiphi na umntwana. Ulwaphulo-mthetho ngokwesondo luphezulu 53% ukususela ngo-2006-7 ngokwemibala ye-2015-16 evezwe nguRhulumente waseScotland. Ukunyuka okukhulu ekunikeleni ingxelo ngolwaphulo-mthetho ngokwesondo ngenxa yempembelelo ye-Savile kunye neendlela 'zokunyamezela' kwindlela yamapolisa kunye neenkonzo zokushushisa. Ukuphakama okukhulu kudibanisa kunye nokufika kwe-intanethi enkulu. Ingaba ukwandisa ukufikelela kwi-intanethi yinto engundoqo?
Umthetho kwizonyango zesini ENgilani naseWales nangaphakathi eScotland ubona umntu omncinane "umntwana," kwaye ufuna ukukhuselwa, kude kube yiminyaka eyi-18.
Nangona kunjalo ubudala bemvume yokulala ngesondo ngu-16 iminyaka. Abaninzi abaselula abakwaziyo ukuba nangona bangaphezu kweminyaka yobudala besondo, abavunyelwe emthethweni ukuba bathathe i-selfie yobukroti baze bathumele kude kube yi-18 yeminyaka ubudala. Ukufumaneka kwezithombe 'zabantwana' ngaphandle kwemvume akukho mthethweni. Umntwana phantsi kwe-13 akayikho, phantsi kweyiphi na imeko, unamandla okusemthethweni ukuba avume nayiphi na uhlobo lwezenzo zesondo.
Umthetho kule ndawo wawujoliswe ngokukodwa ekusebenziseni amadoda amakhulu kunye nomlinganiselo omncinci wabasetyhini abanomdla ekulungiseleleni abantwana abaye baceba ukuba baqhagamshelane ngesondo okanye bafuna ukubandakanya abantwana kwihenyukazi okanye kwiimifanekiso engamanyala. I umthetho eNgilani naseWales ithi "Abantwana ababandakanyeka ekuhenyuzeni ikakhulu ngamaxhoba okuphathwa gadalala kwaye abantu ababaxhaphazayo ngokubaxhaphaza, bangabaxhaphazi babantwana."
Ngoku ukuchazwa ngokuthe ngqongqo 'komntwana' kuthetha ukuba ulutsha oluhlolisisa ukufunwa kwabo ngokwesondo, ngoncedo lwe-teknoloji entsha, lunokuhlawulwa ngokunyanisekileyo kwezesondo.
Ngokuqinisekileyo abashushisi baqaphele ukuba bajonge zonke iimeko kwaye bawubhale kuphela ityala lokutshutshiswa ukuba kunomdla woluntu ukwenza njalo.
Baya kuqwalasela izinto ezifana nokuhluka kweminyaka phakathi kwamaqela, ubumbano phakathi kwamaqela ngokubhekiselele kwintlalo yesini, ngokomzimba, emoyeni nasekufundeni kunye nolwalamano lwabo.
Kwi-2014 eNgilani, umfana wesikolo uphenywe emva kokuthumela isithombe esingenanto engenakuyibona. Kamva wathola isilumkiso esithumele umzobo kubahlobo bakhe emva kokuba yena kunye nentombazana bekekile ukuba babe sibini. Umthetho omtsha, Ukuziphatha okungafanelekanga kunye noMthetho woKunoSondo, ijongene 'nokuziphindezela kwi-porn' okt ukuhanjiswa kwemifanekiso yesondo ngaphandle kwemvume. Jonga iphepha elahlukileyo ukuphindezela kuyo.
Umba apha apha ukungabikho okanye ukuphulwa kwemvume. Indlela yokunyamezela 'ukunyamezela' kulo msebenzi ibonakala yamukelwa ngabaphathi bamatyala kunye namapolisa e-UK.
Yintoni imvume kwimithetho? >>